Yɛde Nokwaredi Gyina Onyankopɔn Nniso Nkutoo Akyi | Onyankopɔn Ahenni
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Lunda Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Onyankopɔn nkurɔfo di Ahenni no nokware, enti wɔnyɛ wiase no fã
1, 2. (a) Nnyinasosɛm bɛn na Yesu akyidifo no adi akyi de abesi yɛn bere yi so? (b) Dɛn na atamfo ayɛ sɛ wɔde bedi yɛn so nkonim, na dɛn na afi mu aba?
NÁ Yesu gyina Pilato a ɔyɛ aban temmufo a ɔwɔ tumi sen biara wɔ Yuda man no mu no anim, na ɔkaa nnyinasosɛm bi a N’akyidifo anokwafo adi akyi de abesi nnɛ no ho asɛm. Ɔkae sɛ: “M’ahenni mfi wiase. Sɛ m’ahenni fi wiase a, anka m’asomfo bɛko na wɔamfa me amma Yudafo no. Nanso sɛnea ɛte no, m’ahenni mfi ha.” ( Yoh. 18:​36) Ɛwom sɛ Pilato ma wokum Yesu de, nanso nkonim a odii wɔ Yesu so no ankyɛ. Wonyanee Yesu. Ahemfo a na wɔwɔ Roma Ahemman a ɛwɔ tumi no mu no tuu wɔn ani sii Kristo akyidifo no so, nanso nea wɔyɛe nyinaa ankosi hwee. Saa bere no, Kristofo no trɛw Ahenni no ho asɛmpa no mu kɔɔ wiase nyinaa.​—Kol. 1:23.
2 Bere a wɔde Ahenni no sii hɔ wɔ afe 1914 mu no, asraafo a wɔwɔ tumi sen biara wɔ abakɔsɛm mu no mu binom de sii wɔn ani so sɛ wɔbɛtɔre Onyankopɔn nkurɔfo ase. Nanso, wɔn mu biara antumi anni yɛn so nkonim. Aban ne amanyɔkuw pii de sii wɔn ani so sɛ wɔbɛhyɛ yɛn ma yɛagyina wɔn afã wɔ wɔn akodi mu. Nanso, wɔantumi amma mpaapaemu amma yɛn mu. Ɛnnɛ, ɛkame ayɛ sɛ, yehu Ahenni no manfo wɔ ɔman biara a ɛwɔ asase yi so mu. Ɛwom sɛ yɛnte faako de, nanso yɛyɛ anuanom a yɛwɔ wiase nyinaa a biakoyɛ wɔ yɛn mu ankasa, na yɛmfa yɛn ho nhyehyɛ wiase no amanyɔsɛm biara mu. Biakoyɛ a ɛwɔ yɛn mu no yɛ adanse a edi mũ a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn Ahenni redi tumi, na Ɔhene Yesu Kristo gu so rekyerɛ ne manfo kwan, ɔretew wɔn ho, na ɔrebɔ wɔn ho ban. Momma yensusuw ɔkwan a wafa so ayɛ saa no ho, na yɛnhwɛ nkonim a ɛhyɛ gyidi den a wama yɛadi wɔ asɛnnibea no bi, bere a yɛrebɔ mmɔden sɛ yɛrenyɛ “wiase no fã” no.​—Yoh. 17:14.
Asɛnkɛse Bi a Ɛsɔree
3, 4. (a) Bere a wɔwoo Ahenni no, nsɛm bɛn na esisii? (b) So bere nyinaa na na Onyankopɔn nkurɔfo te ɔfã biara a yennyina no ase? Kyerɛkyerɛ mu.
3 Bere a wɔwoo Ahenni no, ɔko baa soro, na afei wɔtow Satan baa asase so. (Monkenkan Adiyisɛm 12:​7-10, 12.) Ɔko bi nso kɔɔ so wɔ asase so a ɛsɔɔ Onyankopɔn nkurɔfo gyidi hwɛe. Sɛnea Yesu anyɛ wiase no fã no, na wɔn nso asi wɔn bo sɛ wɔrenyɛ wiase no fã. Nanso, mfiase no, na wonnim nea wɔyɛ a ɛbɛkyerɛ ankasa sɛ wɔatwe wɔn ho afi amanyɔsɛm ho koraa.
4 Sɛ nhwɛso no, Millennial Dawn nhoma * no Po VI a wontintim no afe 1904 no hyɛɛ Kristofo nkuran sɛ wɔntwe wɔn ho mfi akodi ho. Nanso, ɛkae sɛ sɛ wɔhyɛ Kristoni bi de no kɔ sraadi a, ɛsɛ sɛ ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ nnwuma bi a ɛmfa akodi ho. Sɛ wannya adwuma bi a ɛte saa na sɛ wɔde no kɔ akono a, ɛsɛ sɛ ɔhwɛ sɛ ɔrenni awu. Bere a Herbert Senior a ɔbɔɔ asu afe 1905 wɔ Britain no reka nea ɛkɔɔ so saa bere no ho asɛm no, ɔkae sɛ: “Ná anuanom nhu nea wɔnyɛ, na na wonnya akwankyerɛ biara a emu da hɔ a ɛkyerɛ sɛ wobetumi akɔ sraadi na ebia adwuma biara a ɛboa akodi na wɔrentumi nyɛ.”
5. Ɔkwan bɛn so na Ɔwɛn-Aban a ɛbae wɔ September 1, 1915 no ma yefii ase nyaa ɔfã biara a yennyina no ho ntease a edi mũ?
5 Nanso, Ɔwɛn-Aban a ɛbae September 1, 1915 no fii ase kyerɛkyerɛɛ asɛm yi mu ma yenyaa ɛho ntease a edi mũ. Ɛkaa nyansahyɛ ahorow a wɔde mae wɔ Studies in the Scriptures nhoma no mu ho asɛm sɛ: “Sɛ yɛyɛ saa a, so ɛrenkyerɛ sɛ yɛagyae yɛn mũdi mu anaa?” Na wɔka kyerɛ Kristoni bi sɛ sɛ wanhyɛ asraafo atade na wankɔ sraadi a wɔbɛbɔ no tuo nso ɛ? Nsɛmma nhoma no kae sɛ: “Sɛ obi si ne bo sɛ obedi Asomdwoe Hene no ahyɛde so na ɛno nti wɔtow no tuo kum no a, mfaso wɔ so koraa sen sɛ ɔbɛyɛ ne ho sɛ nea ɔreyɛ adwuma ama wiase ahemfo no a ɛno bɛkyerɛ sɛ wapo yɛn Soro Hene no nkyerɛkyerɛ na ne nyinaa akyi no, wɔatow no tuo akum no. Sɛ wɔka sɛ yenyi owu abien yi mu biako a, yebeyi nea edi kan no​—eye sɛ yebedi nokware ama yɛn Soro Hene no na wɔakum yɛn.” Asɛm a emu yɛ duru yi a nsɛmma nhoma no kae nyinaa akyi no, ɛde baa awiei sɛ: “Yɛnhyɛ obiara sɛ ɔnyɛ nea yɛreka yi. Nyansahyɛ kɛkɛ na yɛde rema.”
6. Dɛn na woasua afi Onua Herbert Senior asɛm no mu?
6 Anuanom binom tee ase sɛ ɛnyɛ papa sɛ wɔbɛkɔ sraadi, na wosii gyinae sɛ wɔrenkɔ. Herbert Senior a yɛafa n’asɛm aka dedaw no kae sɛ: “Me fam de, mihui sɛ atuo mmoba a mɛboa ma wɔayi afi po so hyɛn mu [adwuma a ɛmfa akodi ho] ne atuo mmoba a mede begu atuo mu ma wɔatow no yɛ ade koro.” (Luka 16:​10) Esiane sɛ Onua Senior ahonim amma wankɔ sraadi nti wɔde no too afiase. Wɔde ɔno ne anuanom 4 ne ɔsom afoforo mufo a wɔn nso wɔn ahonim nti wɔankɔ sraadi no guu afiase. Ná wɔn nyinaa dodow si 16. Wodii mmere a wɔde maa wɔn no mu bi wɔ Richmond afiase wɔ Britain, na akyiri yi, wɔbɛfrɛɛ saa nneduafo yi Richmond 16. Bere bi, atumfoɔ no faa sum ase de Herbert ne nneduafo a na wɔka ne ho no bi faa po so hyɛn kɔɔ akono wɔ France. Bere a woduu hɔ no wobuu wɔn kumfɔ sɛ wɔmmɔ wɔn tuo. Wɔtoo ɔne afoforo bi santen sɛ wɔbɛbɔ wɔn tuo, nanso wɔannya ankum wɔn. Mmom no, wɔde wɔn guu afiase mfe du.
“Mebɛtee ase sɛ, wɔ ɔko bere mu mpo no, ɛsɛ sɛ Onyankopɔn nkurɔfo ne onipa biara tena asomdwoe mu.”​—Simon Kraker (Hwɛ nkyekyɛm 7)
7. Bere a Wiase Ko II no fii ase no, na dɛn na Onyankopɔn nkurɔfo abɛte ase?
7 Bere a Wiase Ko II no fii ase no, na Yehowa nkurɔfo nyinaa abɛte afã biara a wonnyina wɔ wiase no nsɛm mu no ase yiye, na na wɔahu nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ de kyerɛ sɛ wɔresuasua Yesu. (Mat. 26:​51-53; Yoh. 17:​14-16; 1 Pet. 2:​21) Sɛ nhwɛso no, na asɛntitiriw bi a n’asɛmti ne “Ɔfã Biara a Yennyina Wɔ Wiase no Nsɛm Mu” wɔ Ɔwɛn-Aban a ɛbae November 1, 1939 no mu. Nsɛmma nhoma no kae sɛ: “Akwankyerɛ a ɛwɔ hɔ ma Yehowa nkurɔfo a ɔne wɔn ayɛ apam seesei ne sɛ wɔrennyina ɔfã biara wɔ amanaman no akodi mu.” Simon Kraker a akyiri yi ɔkɔsomee wɔ yɛn wiase nyinaa adwumayɛbea ti a ɛwɔ Brooklyn, New York no, kaa saa nsɛmma nhoma no ho asɛm sɛ: “Mebɛtee ase sɛ, wɔ ɔko bere mu mpo no, ɛsɛ sɛ Onyankopɔn nkurɔfo ne onipa biara tena asomdwoe mu.” Wɔde saa honhom fam aduan no maa Onyankopɔn nkurɔfo wɔ bere a ɛsɛ mu, na ɛboaa wɔn ma wosiesiee wɔn ho maa sɔhwɛ a emu yɛ den sen biara a na wobehyia wɔ nokware a wobedi ama Ahenni no mu no.
Ɔsɔretia a Ɛte sɛ “Asubɔnten” Baa Wɔn So
8, 9. Ɔkwan bɛn so na ɔsomafo Yohane nkɔmhyɛ no baa mu?
8 Ɔsomafo Yohane hyɛɛ nkɔm sɛ sɛ wɔwo Ahenni no wɔ afe 1914 mu a, ɔtweaseɛ a ɔne Satan Ɔbonsam bepuw nsu a ɛte sɛ asubɔnten afi n’anom sɛ ɔde retɔre wɔn a wodi Onyankopɔn Ahenni no akyi no ase. * (Monkenkan Adiyisɛm 12:​9, 15.) Ɔkwan bɛn so na Yohane nkɔmhyɛ no baa mu? Efi afe 1920 mfe no mu reba no, wɔsɔre tiaa Onyankopɔn nkurɔfo denneennen. Wɔde Onua Kraker too afiase sɛnea wɔde anuanom pii a wɔkɔɔ so dii Onyankopɔn Ahenni no nokware wɔ Amerika Atifi fam no guu afiase no. Nokwasɛm ne sɛ, bere a ɔko no rekɔ so no, na nnipa a wɔn som nti wɔamfa wɔn ho anhyɛ ɔko no mu ma enti wɔde wɔn guu afiase wɔ United States no mu baasa biara mu baanu yɛ Yehowa Adansefo.
9 Ná Ɔbonsam ne ne nkurɔfo asi wɔn bo sɛ baabiara a Ahenni no manfo wɔ biara no, wɔbɛsɛe wɔn gyidi. Wɔde wɔn kɔɔ asɛnnibea ne asɛnnibea baguafo ahorow anim wɔ Afrika, Europa, ne United States nyinaa. Esiane sɛ na wɔasi wɔn bo denneennen sɛ wɔremfa wɔn ho nhyehyɛ wiase no nsɛm mu nti, wɔde wɔn guu afiase, wɔhwee wɔn, na wodii wɔn dɛm. Wɔ Germany no, esiane sɛ Onyankopɔn nkurɔfo anka asɛm a na wɔka de hyɛ Hitler anuonyam anaa wɔamfa wɔn ho anhyɛ ɔko no mu nti, wɔde nhyɛso a emu yɛ den baa wɔn so. Wobu akontaa sɛ wɔde wɔn mu 6,000 guu afiase wɔ Nasi nniso ase, na Adansefo a wɔyɛ Germanfo ne wɔn a wɔnyɛ Germanfo bɛboro 1,600 na wɔyɛɛ wɔn ayayade ma wowuwui. Eyi nyinaa akyi no, Ɔbonsam antumi anyɛ Onyankopɔn nkurɔfo adebɔne bi a ebetumi asɛe wɔn koraa.​—Mar. 8:​34, 35.
“OWUI DE HYƐƐ ONYANKOPƆN ANUONYAM”
BERE a wiase ko a ɛto so abien no rekɔ so no, na Yehowa Adansefo a wɔwɔ Nasi Germany no nnɔɔso. Abakɔsɛm kyerɛwfo Detlef Garbe kae sɛ ɛmfa ho sɛ na wɔnnɔɔso no, “nnipa a wɔn ahonim nti wɔankɔ sraadi ma wobuu wɔn fɔ wɔ asraafo asɛnnibea . . . wɔ Nasi Nniso ase no mu dodow no ara yɛ Yehowa Adansefo.” Wɔn mu biako ne Gerhard Steinacher a na wadi mfe 19 a ofi Austria no. Wiase Ko II no fii ase no, esiane sɛ wamfa ne ho ammɔ German asraafo no nti ankyɛ na Nasifo no kyeree no.
Wobuu Gerhard kumfɔ wɔ November 1939 mu. Saa ɔsram no, ɔkyerɛw krataa bi fii afiase sɛ: “Nea ehia me paa ne sɛ mɛhyɛ Onyankopɔn anuonyam, adi n’ahyɛde so, na masrɛ no sɛ onnye me nkɔ n’Ahenni mu, baabi a yebenya daa nkwa ne asomdwoe no.”
Ade rebɛkye ma wɔakum Gerhard wɔ March 29, 1940 no, ɔne n’awofo dii nkra sɛ: “Meda so ara yɛ abofra. M’adesrɛ ne sɛ Awurade bɛma me akokoduru ma matumi agyina.” Wokum Gerhard bɛyɛ anɔpa nnɔnsia wɔ ɛda a edi hɔ no, na ɛbɛyɛ sɛ afiri na wɔde twaa ne ti. Wɔkyerɛwee wɔ n’adamoa so sɛ: “Owui de hyɛɛ Onyankopɔn anuonyam.”
“Asase” Menee “Asubɔnten” No
10. Dɛn na “asase” no gyina hɔ ma, na ɔkwan bɛn so na atwitwa agye Onyankopɔn nkurɔfo?
10 Ɔsomafo Yohane nkɔmhyɛ no ma yehu sɛ “asase”​—nnipa bi a wɔwɔ tumi wɔ wiase yi mu a wɔwɔ adwempa​—bɛmene ɔtaa a ɛte sɛ “asubɔnten” no, a nea ɛkyerɛ ne sɛ, wɔbɛboa Onyankopɔn nkurɔfo. Ɔkwan bɛn so na saa nkɔmhyɛ no fã yi abam? Wɔ Wiase Ko II no akyi mfe bi no, “asase” no atwitwa agye Mesia Ahenni no akyitaafo anokwafo mpɛn pii. (Monkenkan Adiyisɛm 12:​16.) Ɛho nhwɛso bi ne sɛ, asɛnnibea akɛse abɔ Yehowa Adansefo ahofadi ho ban ma wotumi ka sɛ wɔrenkɔ sraadi, na wɔremfa wɔn ho nhyɛ ɔmampɛ ho guasodeyɛ bi mu. Nea edi kan, momma yensusuw nkonim akɛse a Yehowa ama ne nkurɔfo adi wɔ asraadi ho nsɛm mu no ho nhwɛ.​—Dw. 68:20.
11, 12. Asɛm bɛn na ɛtoo Onua Sicurella ne Onua Thlimmenos, na dɛn na efii mu bae?
11 United States. Ná Anthony Sicurella awofo yɛ Adansefo a wɔwɔ mma baasia. Bere a ɔbɔɔ asu no, na wadi mfe 15. Odii mfe 21 no, ɔkɔkyerɛw ne din wɔ abaguafo a wɔfa asraafo no hɔ sɛ obi a ɔka Onyankopɔn asɛm. Nanso, mfe abien akyi, afe 1950 no, ɔkɔe sɛ wɔnyɛ nsakrae na wɔnkyerɛw ne din sɛ obi a n’ahonim nti ɔrenkɔ sraadi. Ɛwom sɛ Ɔman Nhwehwɛmu Asoɛe (FBI) no anhu biribi bɔne wɔ ne ho de, nanso ɔman no Asoɛe a Ɛhwɛ Atɛntrenee Ho Nsɛm So no ampene n’abisade no so. Bere a wɔkɔɔ Onua Sicurella asɛm no so wɔ asɛnnibea mpɛn dodow bi no, U.S. Asɛnnibea Kunini no bɔɔ atɛn a asɛnnibea ketewa no bui no gui, na wobuu Onua Sicurella bem. Saa atemmu yi bɛyɛɛ sɛnnahɔ maa nnipa foforo a wɔwɔ United States a wɔn ahonim nti wɔnkɔ sraadi no.
12 Greece. Wɔ afe 1983 no, wobuu Iakovos Thlimmenos fɔ sɛ watew atua sɛ ɔrenhyɛ asraafo atade, na wɔde no too afiase. Bere a woyii no fii afiase no, ɔkɔhwehwɛɛ adwuma sɛ obi a ɔhwɛ sika so nanso wɔamfa no, efisɛ na wanya kyerɛwtohɔ a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔsɛmmɔnedifo. Ɔde asɛm no kɔɔ asɛnnibea, nanso bere a asɛnnibea ahorow a ɛwɔ Greece buu no fɔ no, ɔde asɛm no kɔdanee Europa Asɛnnibea a Ɛhwɛ Nnipa Ahofadi Ho Nsɛm So no. Wɔ afe 2000 no, Europa Asɛnnibea no Bagua Kɛse a emu atemmufo yɛ 17 no buu no bem ma ɛbɛyɛɛ sɛnnahɔ wɔ nyiyim a wɔyɛ tia nnipa ho. Ansa na wɔrebu saa atɛn no, na wɔayɛ anuanom bɛboro 3,500 a wɔwɔ Greece ho kyerɛwtohɔ sɛ wɔyɛ nsɛmmɔnedifo esiane sɛ wɔamfa wɔn ho anhyehyɛ wiase no nsɛm mu ma wɔde wɔn guu afiase nti. Bere a wobuu onua no bem akyi no, Greece man no yɛɛ mmara bi de yii nsɛmmɔnedi ho sobo biara a na wɔde abɔ saa anuanom no fii hɔ. Afei nso, bere a wɔyɛɛ nsakrae wɔ Greece Amanyɔ Mmara mu no, wɔde mmara bi a na wɔayɛ wɔ mfe kakra bi a na atwam sɛ Greeceni biara wɔ hokwan sɛ ɔpaw adwuma foforo a ɛmfa sraadi ho no hyɛɛ mu.
“Mebɔɔ Yehowa mpae denneennen ansa na merekɔ asɛnnibea dan no mu, na ɛno akyi no, metee nka sɛ wama me koma atɔ me yam.”​—Ivailo Stefanov (Hwɛ nkyekyɛm 13)
13, 14. Asuade bɛn na wususuw sɛ yebetumi anya afi asɛm a ɛtoo Ivailo Stefanov ne Vahan Bayatyan no mu?
13 Bulgaria. Wɔ afe 1994 no, na Ivailo Stefanov adi mfe 19, na wɔhyɛɛ no sɛ wɔde no rekɔ sraadi. Wankɔ sraadi no, na saa ara nso na wanyɛ nnwuma bi a ɛnyɛ asraafo adwuma, nanso asraafo na wɔhwɛ so. Wɔde no too afiase asram 18, nanso ogyinaa hokwan a ɔwɔ sɛ obi a n’ahonim nti ɔnkɔ sraadi no so de asɛm no kɔdan asɛnnibea foforo. Awiei koraa no, wɔde n’asɛm no kopuee Europa Asɛnnibea no anim. Ansa na wobedi asɛm no wɔ afe 2001 no, aban no ne Onua Stefanov siesiee asɛm no. Bulgaria aban no maa Onua Stefanov ahofadi, ɛnna wɔsan nso maa Bulgariafo nyinaa a wɔpɛ sɛ wɔpaw adwuma foforo a ɛmfa sraadi ho saa ahofadi no bi. *
14 Armenia. Wɔ afe 2001 no, na Vahan Bayatyan adi mfe a ɛsɛ sɛ ɔkɔ sraadi. * Ɔkae sɛ, n’ahonim nti ɔrenkɔ sraadi, nanso asɛnnibea ahorow a ɛwɔ ɔman no mu a ɔde n’asɛm kɔdan wɔn no nyinaa buu no fɔ. Enti wɔ September 2002 no, wɔde no too afiase mfe abien ne fã, nanso bere a ɔdaa afiase asram du ne fã no, woyii no. Saa bere no, ɔde asɛm no kɔdan Europa Asɛnnibea no ma wodii. Nanso, wɔ October 27, 2009 no, saa Asɛnnibea no nso buu no fɔ. Saa atemmu no nti, na ɛte sɛ nea anuanom a wɔwɔ Armenia a wɔn nso rehyia asɛnkoro no ara no adi nkogu kɛse. Nanso, Europa Asɛnnibea no Bagua Kɛse no san hwehwɛɛ asɛm no mu. Asɛnnibea no buu Vahan Bayatyan bem wɔ July 7, 2011. Saa bere no ne nea edi kan a Europa Asɛnnibea no gye toom sɛ esiane sɛ obiara wɔ hokwan sɛ ɔkyerɛ n’adwene wɔ nneɛma ho, ogyina n’ahonim so yɛ ade, na ɔde ne ho hyɛ ɔsom a ɔpɛ mu nti, sɛ ne som nti ɔrenkɔ sraadi a, ɛsɛ sɛ wɔbɔ saa hokwan a ɔwɔ no ho ban. Ɛnyɛ hokwan a Yehowa Adansefo wɔ nkutoo na saa atemmu no bɔɔ ho ban, na mmom ɛbɔɔ nnipa ɔpepehaha pii a wɔwɔ aman a wɔdɔm Europa Bagua no nyinaa nso ho ban. *
ECHR no abu anuanom a na wɔde wɔn agu afiase wɔ Armenia no bem ma enti wɔayi wɔn
Ɔmampɛ Ho Guasodeyɛ Ho Asɛm
15. Dɛn nti na Yehowa nkurɔfo mfa wɔn ho nhyɛ ɔmampɛ ho guasodeyɛ mu?
15 Esiane sɛ Yehowa nkurɔfo di Mesia Ahenni no nokware nti, wɔmfa wɔn ho nhyɛ sraadi mu, na saa ara nso na wɔmfa wɔn ho nhyehyɛ ɔmampɛ ho guasodeyɛ mu. Efi Wiase Ko II no so titiriw no, ɔmampɛ agye nkurɔfo adwene wɔ wiase nyinaa. Wɔ aman pii mu no, wɔhwehwɛ sɛ ɔmanfo no ka ntam de kyerɛ sɛ wɔdɔ wɔn man. Ɛno nti, wɔma wɔka ɔman ntam, wɔto ɔman dwom, anaasɛ wokyia frankaa. Nanso, yɛn de, Yehowa nkutoo na yɛsom no. (Ex. 20:​4, 5) Ɛno nti, yɛahyia ɔtaa pii. Nanso, Yehowa asan ama “asase” amene ɔtaa a ɛte sɛ asubɔnten no bi. Momma yensusuw nkonim akɛse a Yehowa nam Kristo so ama yɛadi wɔ saa asɛm yi mu krakra ho nhwɛ.​—Dw. 3:8.
16, 17. Asɛm bɛn na ɛtoo Lillian ne William Gobitas, na dɛn na woasua afi mu?
16 United States. Wɔ afe 1940 no, U.S. Asɛnnibea Kunini no atemmufo 9 no mu 8 buu atɛn tiaa Yehowa Adansefo wɔ asɛm bi a na ɛfa Minersville School District v. Gobitis no mu. Ná Lillian Gobitas * a wadi mfe 12, ne ne nuabarima William a wadi mfe 10 no pɛ sɛ wɔkɔ so di Yehowa nokware, enti wɔankyia frankaa, na saa ara nso na wɔanka ɔman no ntam no. Ɛno nti, woyii wɔn adi fii sukuu mu. Wɔn asɛm no koduu Asɛnnibea Kunini no anim, na Asɛnnibea no kae sɛ ɔman no mmara pene nea sukuu mpanyimfo no yɛe no so efisɛ ɛboa ma “ɔman no yɛ biako.” Saa atemmu yi ma wofii ase de ɔtaa a emu yɛ den baa anuanom so. Woyii Adansefo mmofra pii adi fii sukuu mu, woyii Adansefo pii adi fii adwumam, na basabasayɛfo yɛɛ Adansefo pii ayayade. Nhoma bi kae sɛ, “Ɔtaa a wɔde baa Adansefo no so fi afe 1941 besi afe 1943 mu no ne basabasayɛ a ɛsen biara a ɔsom nti wɔde baa nnipa bi so wɔ Amerika wɔ afeha a ɛto so aduonu no mu.”​—The Lustre of Our Country.
17 Onyankopɔn atamfo no nkonimdi no ankyɛ. Wɔ afe 1943 no, Asɛnnibea Kunini no dii asɛm foforo a ɛte sɛ Gobitis de no ara. Wɔtoo din West Virginia State Board of Education v. Barnette. Saa bere yi de, Asɛnnibea Kunini no buu Yehowa Adansefo no bem. Ɛno ne nea edi kan wɔ U.S. abakɔsɛm mu a na Asɛnnibea Kunini no asesa n’ano wɔ bere tiaa bi akyi. Wɔ saa atemmu no akyi no, sɛnea na nkurɔfo ayi wɔn anim retaa Yehowa nkurɔfo wɔ United States no ano brɛɛ ase koraa. Eyi ma wɔhyɛɛ ahofadi a United States man no mma nyinaa wɔ no mu den.
18, 19. Dɛn na Pablo Barros kae sɛ ɛboaa no ma otumi gyinaa pintinn, na dɛn na Yehowa asomfo foforo betumi ayɛ de asuasua no?
18 Argentina. Wɔ afe 1976 no, esiane sɛ Pablo ne Hugo Barros a na wɔadi mfe awotwe ne mfe ason no amfa wɔn ho anhyɛ frankaa a wɔma so ho guasodeyɛ bi mu nti, woyii wɔn adi fii sukuu mu. Bere bi, ɔkyerɛkyerɛfo panyin no piaa Pablo na ɔbɔɔ no twɛre. Bere a wɔpɔn sukuu no, ɔmaa mmarimaa baanu no kaa sukuu mu dɔnhwerew biako, na saa bere no nyinaa na ɔreyɛ nea obetumi biara sɛ ɔbɛma wɔde wɔn ho ahyɛ ɔman ho dɔ ho guasodeyɛ no mu. Pablo kaa ateetee a wɔfaa mu no ho asɛm sɛ: “Sɛ ɛnyɛ Yehowa na ɔboaa me a, anka mantumi annyina ano.”
19 Bere a wɔde asɛm no kɔɔ asɛnnibea no, ɔtemmufo no penee so sɛ eye sɛ wɔapam Pablo ne Hugo afi sukuu mu. Nanso, wɔde wɔn asɛm no kɔdan Argentina Asɛnnibea Kunini no. Wɔ afe 1979 no, saa Asɛnnibea no bɔɔ gyinae a asɛnnibea ketewa no sii no gui, na wɔkae sɛ: “Mmofra no a wɔpam wɔn fii sukuu mu no tia hokwan a wɔwɔ wɔ amanyɔ mmara mu sɛ wosua ade (Amanyɔ mmara a ɛto so 14) ne asɛyɛde a Ɔman no wɔ sɛ ɛhwɛ ma obiara kɔ mfitiase sukuu (Amanyɔ mmara a ɛto so 5) no.” Saa nkonimdi no boaa Adansefo mma bɛyɛ 1,000. Ebinom wɔ hɔ a wɔannya anyi wɔn adi, na wɔsan gyee afoforo te sɛ Pablo ne Hugo wɔ aban sukuu mu bio.
Mmabun pii a wɔyɛ Adansefo adi nokware wɔ sɔhwɛ mu
20, 21. Ɔkwan bɛn so na asɛm a ɛtoo Roel ne Emily Embralinag no ahyɛ wo gyidi den?
20 Philippines. Wɔ afe 1990 no, woyii Roel Embralinag * a na wadi mfe 9, ne ne nuabea Emily a na wadi mfe 10, ne sukuufo a wɔyɛ Adansefo bɛyɛ 66 adi fii sukuu mu sɛ wɔankyia frankaa. Roel ne Emily papa, Leonardo, bɔɔ mmɔden sɛ ɔne sukuu mpanyimfo no besusuw asɛm no ho, nanso anyɛ yiye. Bere a asɛm no mu yɛɛ den no, Leonardo de asɛm no kɔtoo Asɛnnibea Kunini no anim. Ná Leonardo nni sika ne mmaranimfo a obedi asɛm no ama no. Abusua no bɔɔ Yehowa mpae denneennen de hwehwɛɛ akwankyerɛ. Saa bere no nyinaa na nkurɔfo redi ne mma no ho fɛw. Leonardo hwɛ a, na ɛbɛyɛ den sɛ obedi nkonim efisɛ na ɔnkɔɔ mmaranimfo sukuu da.
21 Nanso, abusua no nyaa Felino Ganal a ɔyɛ mmaranimfo a na wayɛ adwuma pɛn wɔ mmaranimfo adwumakuw bi a agye din wɔ ɔman no mu ma odii asɛm no maa wɔn. Asɛm no sii no, na Onua Ganal abɛyɛ Yehowa Dansefo, na na wagyae adwuma a ɔyɛ ma adwumakuw no. Bere a Asɛnnibea Kunini no dii asɛm no, atemmufo a wɔwɔ Asɛnnibea no mu nyinaa buu Adansefo no bem, na wotwaa mmara a wogyinaa so yii mmofra no adi no mu. Saa bere yi nso, wɔn a wɔyɛɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛma Onyankopɔn nkurɔfo agyae wɔn mũdi mu no dii nkogu.
Ɔfã Biara a Yennyina no Ma Yɛyɛ Biako
22, 23. (a) Dɛn nti na yɛadi nkonim akɛse pii wɔ asɛnnibea? (b) Asomdwoe a ɛwɔ yɛn nuanom a wɔwɔ wiase nyinaa ntam no yɛ dɛn ho adanse?
22 Dɛn nti na Yehowa nkurɔfo adi nkonim akɛse pii wɔ asɛnnibea saa? Yenni tumi biara wɔ amanyɔsɛm mu. Nanso, wɔ aman pii ne asɛnnibea pii mu no, atemmufo a wɔwɔ adwempa abɔ yɛn ho ban afi nhyɛso a asɔretiafo a wɔn asɛm yɛ den de aba yɛn so no ho, na ama aman ahorow ayɛ nsakrae wɔ wɔn amanyɔ mmara mu. Akyinnye biara nni ho sɛ, Kristo na wataa yɛn akyi ma yɛadi saa nkonim ahorow no. (Monkenkan Adiyisɛm 6:2.) Dɛn nti na yɛde yɛn nsɛm kɔ asɛnnibea? Ɛnyɛ yɛn botae ne sɛ yɛbɛma wɔasesa mmara a ɛwɔ ɔman bi mu. Mmom no, yɛn botae ne sɛ yɛbɛyɛ nea ebetumi ama yɛakɔ so ayɛ adwuma a yɛn Hene, Yesu Kristo, de ama yɛn no a biribiara nsiw yɛn kwan.​—Aso. 4:29.
23 Yɛn Hene, Yesu Kristo, ahyira mmɔden a n’akyidifo a wɔwɔ wiase nyinaa rebɔ sɛ wɔrennyina ɔfã biara no so wɔ wiase a amanyɔsɛm mu basabasayɛ ne nitan a emu yɛ den ama emu apaapae no mu. Satan adi nkogu wɔ mmɔden a ɔrebɔ sɛ ɔbɛma mpaapaemu aba yɛn mu na wadi yɛn so nkonim no mu. Ahenni no aboaboa nnipa ɔpepem pii a wɔasi gyinae sɛ “wɔrensua akodi bio” no ano. Asomdwoe a ɛwɔ yɛn nuanom a wɔwɔ wiase nyinaa ntam no yɛ anwonwade ankasa​—ɛyɛ adanse a edi mũ paa sɛ Onyankopɔn Ahenni no redi tumi!​—Yes. 2:4.
^ nky. 4 Wɔsan frɛ saa po yi The New Creation. Akyiri yi, wɔbɛfrɛɛ Millennial Dawn nhoma no apo no Studies in the Scriptures.
^ nky. 8 Sɛ wopɛ saa nkɔmhyɛ yi ho nkyerɛkyerɛmu a, hwɛ Adiyisɛm​—N’awiei Koraa Abɛn! nhoma no ti 27, kratafa 184-186.
^ nky. 13 Ná nhyehyɛe a wɔyɛe no san hwehwɛ sɛ Bulgaria aban no ma wɔn a wɔn ahonim nti wɔnkɔ sraadi no nyinaa yɛ nnwuma a ɛmfa sraadi ho, na na ɛnsɛ sɛ wɔma asraafo nso hwɛ wɔn so.
^ nky. 14 Sɛ wopɛ eyi ho nsɛm nyinaa a, hwɛ asɛm a ɛwɔ Ɔwɛn-Aban a ɛbae November 1, 2012, a asɛmti ne “Europa Asɛnnibea a Ɛhwɛ Nnipa Ahofadi Ho Nsɛm So Agye Hokwan a Wɔn a Ahonim Mma Wɔnkɔ Sraadi Wɔ no Atom.”
^ nky. 14 Bɛyɛ mfe 20 ntam no, ná Armenia aban no de Adansefo mmerante bɛboro 450 agu afiase. Wɔ November 2013 no, woyii wɔn a wɔaka no fii afiase.
^ nky. 16 Wodii mfomso wɔ sɛnea wɔkyerɛw abusua no din wɔ asɛnnibea no kyerɛwtohɔ mu no mu.
^ nky. 20 Wodii mfomso kyerɛw abusua no din sɛ Ebralinag wɔ asɛnnibea no kyerɛwtohɔ no mu.
Ɔkwan bɛn so na wobɛkyerɛkyerɛ nea enti a Yehowa nkurɔfo nnyina ɔfã biara wɔ amanyɔsɛm mu no mu?
Adwene bɛn na nkonim ahorow a yɛadi wɔ asɛnnibea no ma wunya wɔ Onyankopɔn Ahenni no ho?
Dɛn na wubetumi ayɛ de akyerɛ sɛ wugyina Onyankopɔn Ahenni no nkutoo akyi?
Wogyinaa Pintinn wɔ “Sɔhwɛ Bere” mu